I-teardown ye-Mac mini entsha isikhombisa i-motherboard ene-M1 | Ngivela kwa-mac
I-teardown ye-Mac mini entsha isikhombisa i-motherboard ene-M1
Ngangikwenza ngisemncane. Lapho ithoyizi likagesi liwela ezandleni zami, ngangingenasikhathi sokuthatha i-screwdriver ngifinyelele kuso. Izimoto ezilawulwa ngomsakazo zaba ubuthakathaka bami. Kwangijabulisa ukubona izingxenye zayo futhi ngizenza zisebenze ngaphandle kwe-chassis.
Namuhla abanye abasebenzisi be-Apple bavame ukwenza okufanayo. Kepha kwelinye izinga, kunjalo. Kuleli sonto kulethwa amayunithi okuqala e-Apple Silicon entsha, kanti abanye abantu sebeswele isikhathi sokuziqaqa baziveze ezinkundleni zokuxhumana. Ake sibone i-a IMac mini M1 ngamathumbu aphume.
Kwezinye izinkundla ze-inthanethi njenge Reddit ezinye izithombe ezintsha seziqalile ukuvela IMac Apple Silicon ukuqaqa. Kuleli sonto i-Apple iqala ukuletha amayunithi okuqala eMac mini ne-Apple Silicon MacBook aqale ukudayiswa ngesonto eledlule, kanti angaphezu kwelilodwa asenaso isikhathi sokukhipha isibindi.
Ekudilikeni kwe-Mac mini entsha, ungabona i-chip entsha ye-M1 ye-Apple, ethengiswa kubhodi yomama encane kakhulu kunaleyo esetshenziswe ku-2018 Mac mini ene-processor ye-Intel. I-M1 i-chip yesiliva emfanekisweni, enelebula APL1102, egcina i-8-core CPU, i-8-core GPU, injini ye-16-core neural, abashayeli be-I / O ku-capsule efanayo.
Lokhu kubukeka kanjani i-M1 ebhodini le-Mac mini.
Imemori yesistimu ehlanganisiwe iyabonakala ohlangothini lwesokunene lwe- M1, futhi kuthatha isikhala esincane kakhulu kunamamojula we-RAM ahlukile asetshenziswe ku-Mac mini yangaphambilini, anikele kubhodi lomama elincane.
Ngokumangazayo, ukuthuthela kwimemori yohlelo oluhlanganisiwe kusho nokuthi i-RAM ayikwazi ukunwetshwa ngemuva kwalokho ngumsebenzisi, njengoba yayinjalo nge-Mac mini endala, ngakho-ke cabanga ngokucophelela ngokukhetha phakathi kuka-8GB noma u-16GB. Isitoreji I-SSD ibuye ihlale ishiselwe epuletini, ngakho-ke ayinakwandiswa ngemuva kwalokho.
Kuvidiyo engenhla lapho kukhishwa khona ukuqaqa iMac mini Apple Silicon entsha, kungabonakala ukuthi inqubo ejwayelekile yokuqaqa le divayisi iyefana kakhulu nemodeli yangaphambilini ka-2018 efake iprosesa Intel.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Amakhompyutha we-Mac » Mac Mini » I-teardown ye-Mac mini entsha isikhombisa i-motherboard ene-M1
ISport Strap ibhande elisha likaNomad le-Apple Watch
Uhlelo lokusebenza lwe-Apple Transporter lubuyekezwa ngokungeza ukuxhaswa kwezilimi ezingama-29